Ọnọdụ ụlọ kacha mma - Ikkaro
Nnwale nke ụlọ bụ nkà nke ijikọta ihe ndị ị nwere ike ịchọta n'ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ ahịa na-enweghị ike ịga ụlọ ọrụ pụrụ iche iji wee lelee ma ọ bụ gosipụta ụfọdụ ihe sayensị.
Ọ bụrụ na nke a bụ general blog, nyocha ụlọ ga-emetụta ya Mee N'onwe Gị, mee ya n'onwe gị na ụdị ọhụụ niile, nkọwa nke usoro gụnyere elektrọnik. Ma n'otu ebe elebara anya dị ka Ikkaro, ebee ihe niile bụ Mee N'onwe Gị, sayensị na teknụzụ arụrụ n'ụlọ anyị kwenyere na ihe niile kwesịrị ịnọ n'ọnọdụ ya.
Iji nkọwa nke "Nnwale", anyị ga-ekewapụta dị ka nnwale ụlọ ọ bụla nke anyị chọrọ ịchọpụta, nyochaa ma ọ bụ gosipụta ihe ngosi sayensị ma ọ bụ ụkpụrụ dị iche iche na ngalaba sayensị na okike.
Anyị na-ahazi site na Nyocha maka ụmụaka. Edoziela ya
Nlere nkewa nke
Emelitere 05/10/2018 -> Anyị malitere idegharị ma mechie kaadị nnwale ọhụrụ na-akọwapụta isi ihe dị iche iche: Akụrụngwa, Ọnụ, Oge mmecha, Afọ nke egosiri maka ya (na nke a, onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-enyere anyị aka n'ihe gbasara nyocha )mụaka) na ihe anyị nwere ike ịmụ, kọwaa ma ọ bụ ihe anyị ga-emikwu emi
Enwere m olile anya na ị ga-enwe mmasị na ọrụ ọhụụ!
Nke a bụ ihe enyi m kụziiri m ogologo oge gara aga, na-eji naanị oroma na obere mmanụ ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu n'ime roket dị mfe ma dị irè m hụworo, ahụkwala m ole na ole ;-) Ọ na-arụ ọrụ site na-ere ụfọdụ ụdị aerosol, ihe na-esi ísì ụtọ ma ọ bụ nke yiri ya, ka ọ na-ere ọkụ karịa ka ọ ka mma.
Etinyewo m ya na ndepụta m. Ma mgbe m kpebiri ime ya, m ga-ahapụrụ gị vidiyo ahụ. Dị nnọọ mfe. Ma ozugbo anyị mere nke anyị, anyị kpọgidere ya na ndozi anyị na-eme ;-)
Taa m bịara ịme ka ị mata esi eme enyo na LED ndị na-emepụta ọwara enweghi ngwụcha. Ọ bụ a mma ngwa anya mmetụta na m chọrọ ịkọrọ ya gị.
Ihe oru a ewela m ihe ruru otu onwa iji nweta ihe niile. Emeela m obere vidiyo banyere etu o siri gbanwee ma rịọ m mgbaghara tupu oge eruo maka ya.
Otu esi eme nzuzu a na-eme n’ụlọ
Ọ bụrụ na ị na-ekiri ihe ngosi Ihe Hormigueron'aka na ị hụtụla Onye nzuzu. Ngwaọrụ ahụ (ekweisi) nke ahụ akpata nsụ ịnụ olu gị na igbu oge nke obere millisecond ka ị na-ekwu okwu
Ofzọ nke mee nzuzu a na-arụ n’ụlọ ọ dị oke mfe, naanị anyị ga-ebudata DAF (Nzaghachi oge nyocha) nke ga-eme nke ahụ, weghachite okwu anyị na igbu oge na milliseconds anyị gwara ya.
Distorter, ndị iberibe na osisi egwuregwu
Enwere Hasbro egwuregwu na Na-agbagọ nke na-eme nke a ma bụrụ ihe na-adọrọ mmasị karịa na ezinụlọ karịa karịa ibudata ngwanrọ ahụ. Ana m ahapụrụ gị njikọ nzụta
Nweta ya ebe a
DAF maka Windows
DAF / FAF nnyemaaka maka Windows
Oge mmeghachi omume nyocha oge - nsụgharị -DAF na Windows Pc
Otu esi eme batrị nnu mmiri n’ime ulo
José Manuel Cano na-ahapụ anyị na Facebook fanpage anyị, vidiyo nke batrị arụrụ n'ụlọ nke ejiri ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme igwe eji eme ya
Anọ m na-achọ otú e si eme a arụrụ n'ụlọ plastic injection igwe. Enwere m ụfọdụ echiche, dị mfe n'ihi na achọrọ m ihe dị ezigbo mkpa, mana achọrọ m ịhụ ihe dị na ịntanetị.
Na acho igwe ogwu ogwu achoputara m home rotomolding igweỌzọkwa-akpali nnọọ mmasị :)
Otu esi eme ka gel oyi na-ekpo ọkụ
Na-eme egwuregwu? Emela? Eji m n'aka na ị maara onye na-eme ya na onye bịara bruises, overloads, wdg. Ha na-ekwu na egwuregwu dị mma ;-)
Otherbọchị ọzọ mgbe m gachara ọzụzụ ogologo oge, abịara m jiri ikpere na-adịghị mma na ihe a na-emebu, iji tinye ice na onwe m. N'ụlọ m nwere akpa nke gel 3M na-ekpo ọkụ na oyi Ma gịnị mere ịzụta otu mgbe ị nwere ike ime ya?
Enwere ihe ngwọta ọdịnala nke ụlọ na-eji akpa peas ma ọ bụ osikapa etinye oyi. Ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ dị ka nwa oge, ha nwere ọghọm nke na enweghị ike iji ha mee ọzọ yana na ha anaghị efe anyị iji tinye okpomọkụ.
Otu esi eme mkpọ gel gel
Ugboro abụọ ogbo mmiri rọketi
N'oge ụfọdụ anyị kwurula banyere ya mmiri rọketi. Mana ihe anyi hapuru taa bu oru nke injin na ugbo elu.
Ọ bụ a abụọ-agba roket mmiri, nke ruru ihe dị ka 250 mita n'ịdị elu; dị ịtụnanya.
Ihe oyiyi nke rọketi nke mere na ị ga-enweta echiche nke ihe anyị na-ekwu.
Ee; ha bụ karama mmiri :)